औषधि उत्पादक संघको नेतृत्वमा पाण्डे र क्षेत्रीको उम्मेदवारी, कसको पल्ला भारी ? – Health Post Nepal
औषधि उत्पादक संघको नेतृत्वमा पाण्डे र क्षेत्रीको उम्मेदवारी, कसको पल्ला भारी ?
२०७६ असोज २७ गते १४:१७
नेपाली औषधि उद्योगको एक मात्र छाता संगठन नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) यतिवेला नयाँ नेतृत्व चयनको सँघारमा छ । नेपाली औषधि बजारमा स्वदेशी उत्पादनको वर्चस्व बढाउने अर्थात् देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान चलिरहँदा समग्र उद्योगलाई दिशानिर्देश गर्ने संघको नयाँ नेतृत्व कस्तो आउला भन्ने चासो र जिज्ञासा सर्वत्र छ । संघको नेतृत्व चयनका लागि २९ असोज (बुधबार) निर्वाचन मिति तोकिएको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान महासचिव प्रज्ज्वलजंग पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी नारायणबहादुर क्षेत्री मैदानमा छन् ।
संघमा सक्रिय भूमिका हुने महासचिवको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिसकेका पाण्डे स्वाभाविक रुपमा अध्यक्षका दाबेदार हुन् । संघलाई कुशल नेतृत्व दिने अठोट उनको छ । उनले एपोनको २९ वर्षकोे इतिहासमा १० वर्षदेखि निरन्तर सदस्यदेखि महासचिवसम्म विभिन्न पदमा रही संघ सार्थक भूमिका तथा नेपाली औषधिको उत्पादन र गुणस्तर अभिवृद्धिका महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् ।
‘नेपालमा उद्योगको विकाससँगै औषधिको विकास, प्रवर्धन र त्यससँगै बजार विस्तार हुनु आवश्यक छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदै आफ्नो क्षमता विस्तार गर्ने तथा सरकार र स्टेकहोल्डरसँगै बढीभन्दा बढी पक्षसँग सहकार्य गरेर नेपाली औषधि विश्वसनीय छन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नेमा विशेष जोड दिने योजना छ ।’
नेपाली उद्योगले हामी आफैँमा सक्षम छौँ भन्ने आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने आवश्यकता पाण्डे औँल्याउँछन् । यसमा सरकार, संघ र अन्य स्टेकहोल्डरबीच साथ, सहयोग र सहकार्यलाई बलियो बनाउन सके आयात प्रतिस्थापन गरी नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सम्भव भएको उनको विश्वास छ । ‘औषधि उत्पादनसँग ज–जसले सरोकार राख्छौँ, ती सबैसँगको पूर्ण सहकार्यमा नेपालमा उच्चस्तरीय र गुणस्तरयुक्त औषधि सुलभ मूल्यमा बन्न सक्छन् भने विश्वसनीयता भोलिका दिनमा दिलाउनु नितान्त आवश्यक छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘यसले हाम्रो आफ्नै उत्पादनमा विश्वास दिलाउँछ र बजार विस्तारमा निश्चितता ल्याउँछ ।’
औषधि विषयमा एमफार्म गरेका पाण्डेले एमबिबिए पढाइसमेत पूरा गरेका छन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का एसोसिएट प्रोफेसरसमेत हुन् । उनले औषधि उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा लगातार २२ वर्ष राम्रो अनुभव बटुलेका छन् । पाण्डे लोमस फर्मास्युटिकल्ससित आबद्ध छन् ।
नेपालमा ठूला र साना गरी करिब ६० वटा स्वदेशी औषधि उद्योग सञ्चालनमा छन् । आगामी एक–डेढ वर्षभित्र १२–१५ वटा नयाँ औषधि उद्योग आउनेक्रममा छन् । नेपाली उद्योगले ७ सयदेखि ७ सय ५० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन् । नेपालमा उत्पादित केही औषधि विदेशी बजारमा समेत निर्यात हुँदै आएका छन् ।
‘अहिलेको नेपाली औषधि बजारको आवश्यकता र चुनौती सर्वविदितै छ । नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति चाहिन्छ भन्ने हिसाबले सरकारले पनि कार्यक्रम अगाडि बढाएको अवस्थामा एपोनले पनि औद्योगिक विकासको वकालत गर्दै आएको छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘बढीभन्दा बढी सहकार्य गरेर नेपालमा नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सक्यौँ र आफ्नो मौलिक प्रविधिको उत्थान गर्न सक्यौँ भने भोलिका दिनमा धेरैभन्दा धेरै बजार ओगट्न सक्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।’
नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने र आयातलाई प्रतिस्थापित गरी निर्यात प्रवर्धन गर्ने मूल एजेन्डा क्षेत्रीको छ । संघलाई मजबुत बनाई औषधि उत्पादनमा जोड दिने क्षेत्री बताउँछन् । ‘नेपालको औषधि बजारमा केही परिर्वतन भएसँगै स्वदेशमै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएका औषधिको आयातमा रोक लगाउनुपर्छ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘मैले नेतृत्व पाएको खण्डमा नेपाली औषधि बजारलाई विस्तार गर्ने दृृष्टिकोण अघि सारेको छु ।’
प्रविधि, क्षमताविस्तारसँगै विश्वसनीयतामा पनि नेपाली उद्योगमा कमी रहेको पाण्डेको ठम्याइ छ । विश्वसनीयता दिलाउनका लागि सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर नेपालमा उच्चस्तरीय गुणकारी, असरयुक्त औषधि बन्छन् भन्ने विश्वसनीयता दिलाउने आफ्नो भावी योजना रहेको पाण्डे बताउँछन्् । अहिले पनि २५–३० प्रतिशत औषधि औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभईकन विभिन्न तरिकाबाट बजारमा उपलब्ध छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नु नितान्त आवश्यक रहेको पाण्डेको भनाइ छ ।
नेतृत्वका अर्का प्रतिस्पर्धी क्षेत्री चितवनमा रहेको टाइम्स फर्मास्युटिकल्ससँग आबद्ध छन् । उनले उद्योग खोलेको २३ वर्ष पूरा भइसकेको छ । नेपाल औषधि उत्पादक संघमा २१ वर्षदेखि आबद्ध क्षेत्रीसित ५ पटक सदस्य, महासचिव हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेको अनुभव छ ।
११ सदस्यीय कार्यसमिति रहेको एपोनमा अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि बाँकी पदाधिकारी अध्यक्षले मनोनीत गर्ने प्रावधान छ । कार्यसमितिमा अध्यक्षसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष, द्वितीय उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र पाँचजना सदस्य रहन्छन् । निवर्तमान अध्यक्ष कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ ।